China n'èzí ịchụ nta / agbapụ / ịkụ azụ mpịachi waterproof oche onye nrụpụta na soplaya |Lousun
Ịchụ nta n'èzí / ịgbapụ / Ịkụ azụ mmiri oche na-adịghị
Waterproof mpịachi ịchụ nta / agbapụ / ịkụ azụ oche, mgbochi esemokwu, akwa na-eguzogide, inogide Iji, siri ike 16mm ígwè tube na ike iburu 100KGS, ntụsara ahụ nọdụ ala mgbe ike gwụrụ na njem.buru ma nọdu ala.
Ihe Nkeji:LSB 2001
Ihe:600D Polyester PVC mkpuchi.
Agba: Green, ma ọ bụ dị ka ahaziri
Nkwakọ ngwaahịa:1pc n'ime a polybag na 5 PC n'ime katọn ma ọ bụ dị ka ahaziri.
Oge Mbuga ozi:Ihe dị ka ụbọchị 65-75.
* Akwa akwa shei dị arọ --- Akpa azuokokoosisi mpịachi mmiri, akwa akwa na-eguzogide, akwa na-eguzogide mmiri, enweghị mmiri, mgbochi ịkpụ, na-adịgide adịgide iji, dị mfe iburu ma dị mfe iji.
* Ogo tube --- 16mm ígwè tube maka àgwà oche ojii, ọkpụrụkpụ 1.2mm maka tube, ọ siri ike ma nwee ike iburu 100KGS mmadụ.
* akwa akwa --- shei oche bụ akwa polyester Sherpa 100% nwere mmetụta ahịhịa, ọ dị mma ịnọdụ ala.
* Nhazi bara uru ---E nwere akpa 5 n'èzí, akpa mkpuchi abụọ dị n'elu, otu akpa akpa n'ihu akpa azụ, na akpa 2 na-ekpuchi n'akụkụ. N'akpa uwe elu, e nwere mkpuchi, mgbe mmiri ozuzo ma ọ bụ snow, na mkpuchi nwere ike ichebe oche site na ihu igwe ọjọọ.
1. LOW MOQ maka usoro mbụ na ụkpụrụ dịnụ na akwa ngwaahịa / ngwa na ụlọ nkwakọba ihe.
2. RISK after-sales Service: biko echegbula ma ọ bụrụ na ọ dịghị onye ga-ahụ maka gị ma ọ bụrụ na ọ bụla àgwà nsogbu mere, pls zitere anyị email ma ọ bụrụ na ị nwere obi abụọ ọ bụla.
3.One-stop OEM & ODM ọrụ, anyị ọnwa ike bụ 10pcs * 40HQ containers.
4. Site na 15 afọ mmepụta akpa mmepụta, àgwà dị mma ka a na-ebuga ya na EU na US na ahịa ndị ọzọ, anyị nwere usoro QC siri ike dabere na AQL2.5-4.0 iji hụ na mbupu ọ bụla zuru oke maka ndị na-azụ ahịa na-eji.
Enwere ike itinye ya n'ọrụ ịchụ nta, ịgba égbè, ịkụ azụ, ịrị elu, ugwu ugwu na ihe ndị ọzọ.Ọ nwere ma ịdị mfe nke iji na ọtụtụ nkasi obi, nke na-egosi anyị ịchọ njem na njem.Ihe na-egbochi mmiri anaghị atụ egwu gburugburu ebe a na-agbanwe agbanwe.
Nke gara aga: Akpa egbe nwere atụmatụ aghụghọ ogologo 38 inch
Osote: Akpa egbe ịchụ nta / agbapụ nwere akwa ụfụfụ akwa 6cm
Oche Azụ Aluminom
azu azu oche
Oche enwere ike ịkụ azụ
Akpa Oche enwere ike mpịaji
Oche Azụ na-apịaji
Akpa azụ azụ oche oche stool
Oche ịchụ nta
Onye isi ịchụ nta Bulkbuy
Oche ịkụ azụ nwere ike ibufe dị arọ
Akpa Azụ nke Ịrịgoro N'èzí
oche mpịaji n'èzí
OEM & ODM China n'èzí ngwugwu ngwugwu ...
ODM & OEM n'èzí Trekking Tactical Day Pa...
OEM & ODM Ubu abụọ Layer Laptọọpụ azụ...
Ngwungwu ụbọchị anaghị egbochi mmiri ịkụ azụ azụ azụ...
Outdoor Trekking Multi-function Tactical Oxford...